भेनेजुएला घटनाः अति महाशक्ति ठानिएको अमेरिकी साम्राज्यवादमाथि ठूलो बज्रपात
बाबुराम गौतम । प्रकाशित मिति : आइतवार, माघ २७, २०७५
हालै दोस्रो कार्यकालका लागि निर्बाचित दक्षिण अमेरिकी माहादेशको एक देश भेनेजुयलाका रास्ट्रपति निकोलस मदुरोले सपथ लिए । उनले कार्यभार समाल्ने सुरुवात के गर्दै थिए अमेरिकी रास्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई खपिनसक्नु भयो । उनि भेनेजुयलामा उपलब्ध प्राकृतिक ग्यासको विशाल भणडार हातमा लिने जुक्ति खोजिरहेकाछन ।
अमेरिकीहरुको एउटा दाउ छ कि सन्सारभरको प्राकृतिक श्रोत कब्जामा लिनु, हतियार उत्पदन र बिक्रीवितरणमा एकाधिकार जमाउनु, बित्तीय पुँजी विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष मार्फत गरीब रास्ट्रहरुलाई ऋणमा डुबाउनु, डर धाक र प्रभावमा पारेर बिश्व बजारमा एकाधिकार जमाउनु अनि साँस्कृतिक र धार्मिक प्रभावमा पारी इसाई साम्राज्य कायम गर्न प्रयत्न गर्नु रहँदै आएको छ ।
यो तथ्यलाई मसिनो गरि बुझ्न उस्ले गरेका केही निकट बिगत परिघटनालाई अध्ययन गर्दा पुग्छ । उस्ले इराकमा किन आक्रमण गर्यो ? त्याहाँ रासायनिक हतियार भणडार छ भन्ने आरोपमा होइन ? तर त्याहाँ पाइयो त रासायनिक आणविक हतियार ? अनि त्याहाँ शान्ति आयो त ? इराकी जनताले अमेरिकी कब्जा पछी समृद्धि पाए ? यी सब के का लागि थियो ? मात्रै इराकी तेल कब्जामा लिनका लागि थियो र अब इराकमा तेल नसकिउनजेल अमेरिकी कब्जामा इराक रहिरहन बाध्य हुनेछ । उस्ले अफगानिस्तान किन कब्जामा लियो ? त्याहाँ शान्ति अनि समृद्धि ल्याउन हो ? कदापि होइन । बरु अफगानिस्तानमा उपलब्ध यूरेनियम, विभिन्न प्रकारका बहुमुल्य धातुहरु र बहुमुल्य जबाहरात कब्जामा लिनु थियो । यत्रो बर्षको लडाइँ पछि अहिले तालिवानसँग शान्तिबार्ताको नाटक मंचन गर्नुले त्यहाँ पनि उस्को लडाइँको भित्री मक्सद बुझ्न गाह्रो छैन । उ भर्खरै सिरियाबाट करिबकरिब हारेर घर फर्कदै छ । यस्तै यस्तै उस्ले विस्वभर लडाइँ गरेको थियो, गरेको छ र गरिरहने छ । कमरेड लेनिनले एउटा प्रसङ्गमा भन्नुभएको थियो ‘साम्राज्यवादीहरू आफूभित्र संकट परेपछि युद्ध मार्फत समाधान खोज्ने गर्छन् ।’
अहिले भेनेजुयलामा त्यही पुनरावृत्ति हुन खोज्दै छ । अमेरिकी स्वतन्त्रता पछी सम्भबत सबैभन्दा ठुलो संकटमा उ फस्दै गएको छ । भनिन्छ शक्तिमा आउन भन्दा शक्तिमा टीकिरहन गाह्रो हुन्छ । अति महाशक्तिको रूपमा बिश्व साम्राज्य चलाइरहेको अमेरिकी मनोबिज्ञान माथि इतिहासकै ठुलो बज्रपात भएको छ । एकातर्फ एशियाली मुलुक चीन आर्थिक माहाशक्ती बन्ने दौडमा खुलेर लागिरहेको छ भने युरोपेली मुलुक रसियाले हतियारको प्रतिस्पर्धामा अमेरिकालाई उछिन्दै गएको पाइएको छ । गत बर्ष मात्रै रसियाले करिब–करिब आधा युक्रेन कब्जामा लिदा समेत अमेरिका बक्तब्य बाजि भन्दा माथि केहि गर्न नसक्नुले उस्को आन्तरिक बास्तबिकता उद्घाटित भएकै थियो । बिगतमा एक छत्र निर्णय लाद्ने गरेको युरोपबाट पनि अपेक्षित सहयोग उसलाई मिल्न छाडेको छ ।
यति सम्म त भएकै थियो आफ्नो नाकै मुनिको दक्षिण अमेरिकी मुलुकले उसको एकाधिकारलाई चुनौती दिनु र आफ्ना प्रतिस्पर्धि रूस र चीनको लगानीमा तेल उत्पादन सुरु गर्नु अमेरिकीहरूलाई किमार्थ स्वीकार्य थिएन । हो यही वरिपरी हाल भेनेजुयला प्रकरण देखापरेको छ । तर याहा पनि उसलाई सजिलो हुने छाँट भने छैन । चीन र रूस खुलेर अगाडि आएको अबस्थामा उस्का कठपुतली रास्ट्रपति सत्तासिन भैहाल्ने लक्षण देखिदैन । भलै नयाँ चुनाव सम्मको घोषणा गराउन सफल भएको खण्डमा ठुलो सफलता मान्नु पर्छ । बाँकी आगामी दिनमा हेर्नू पर्ला ।
भेनेजुयला प्रकरणले नेपाललाई पनि अछुतो छोडेन । उक्त प्रकरणमा नेकपाका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले एक बक्तब्य प्रकासित गरि भेनेजुयली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि आक्रमण नगर्न अमेरिकालाई चुनौती नै उक्त बक्तब्य मार्फत दिइयो । जस्को रापले अझैसम्म नेपाललाई तताइ रहेको छ । यो प्रकरणमा मुख्यत तीन प्रकारका अभिमत बाहिर आए । पहिलो मत यो बक्तब्यको समर्थनमा देखा पर्यो । नेकपा भित्रको ठुलो हिस्साको समर्थन भएकैले सचिबालय बैठकद्वारा अनुमोदित भै समर्थनमा पुनः बक्तब्य दिने काम भयो । दोस्रो मत बिषय बस्तु सहि भए पनि बिश्व साम्राज्य अमेरिकालाई नचीढ्याएको भए हुने थियो भन्ने थियो । नेपालको स्थायीत्व र बिकासमा खासै योगदान दिन नसक्ने भेनेजुयलाको बिसयमा हतारमा बोलेर आफुलाईनै अप्ठेरोमा पार्नुहुन्न भन्ने समुहको मत रह्यो ।
तेस्रो मत सशक्त रूपले विरुद्धमा खडा भयो । जस्ले खुलेर बिरोध गरेको छ । यो समूह अमेरिकी पिछलग्गुको रूपमा देखा पर्छ । अमेरिकी साम्राज्यवादको हुबहु पक्ष पोसण हुने गरि अनि भेनेजुयली जनताको स्वतन्त्रताको हक कुन्ठित हुने गरि देखा परेको यो समूह नितान्त दलालिको भाषा बोलिरहेको छ । लाग्छ कुनै दिन अमेरिकाले नेपालमा यस्तै हर्कत गर्यो भने पनि उनिहरुले रातो कार्पेट विछ्याइएर डोनाल्ड महोदयलाई स्वागत गर्नेछन् । अझ उनिहरु मद्य केही यही निहुमा नेपालको करिबकरिब टुंगिएको शान्ति प्रक्रियामा भाजो हाल्न सकिन्छ कि भनेर दाउ हेर्दै छन भन्ने देखिएको छ ।